Qabsoo karaa nagaa jechuun qawween barbaadchisaa miti jechuu akka hin taane hubatamuu qaba. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQabsoo karaa nagaa jechuun qawween barbaadchisaa miti jechuu akka hin taane hubatamuu qaba.
Godina Shawaa kaabaa Salaalee aanaa giraar jaarsotti milishaa hunda walitti qabuudhaan WBO barbaacha akka deemaniif gara aanaa yaayyaa gullallee fi kuyyuutti ergaa jiraachuun dhagahamee jira. Yeroo ammaa kana milishoonni kunniin yaayyaa gullallee naannoo laga mogorri WBO barbaacha konkolaataatti guurramanii deemaa jiraachuun hubatamee jira. Milishoonni kunniin bilisummaa oromoo ija balleessudhaaf warra deeman waan ta’eef WBO tarkaanfii quubsaa akka fudhatu uummanni salaalee dhaamsa isaa dabarfatee jiraa.
Eezeel Oromiyaa: Irraa
Madda Qaama WQO (OCI) Irraa Page Eze Oromiatti Ergame.
Siyaasaan qabsoo hidhannoo fi qabsoo karaa nagaa keessaa qooda mataa isaa qaba. Qabsoon hidhannoos siyaasa jiraachisuu keessaa gahee of dandahe qaba.
Kana keessatti wanti hubatamuu qabu naamsuma hojii keessatti gaheen namni siyaasaa fi waraanaa beekamee dirqamni isaa maali kan jedhu adda baafachuudha. Karaan nagaa qofatu nu baasa, qawwee malee fala biraa hin qabnuu walitti diinomsanii dubbachuun fafa qaba.
Waraana kee faarsaa kan diina keetii abaaruu dhiisii waraanaan waraana injifadhu!, Siyaasaa Siyaasaan moohadhu! malee siyaasni Qawwee malee kabaja maluuf argachuu fi galma akeeka ganamaa sana gahuu hin dandahu. Walitti hirkatee kaayyoo fi akeeka bu’uuraa galiin gahata
Haasaa #Solomoon irraa kan fudhatame.
#WBOn Waggaa 40 Ol #Oromoo Miliyoona 40 Oliif harrallee #Miillaa duwwaa fi #Shebexeen qabasa’aa jira.Nuti garuu yaa Oromo #Cubbuun #WBO ganaa nu balleessa.Ummatni Miliyoonni 40 Ol Utuu guyyaatti #qarshii tokko #WBOf gumaache,harra WBOn miilla qullaa,beelaan Waxalamaa,#Rasaasa fixee dinaan hin Wareegamu ture.Silaa guyyaatti miliyoona 40 #Walabummaa Oromiyaatiif gumaachine jechuudha.Teenyee Misaayilii,Diroonii fi Taankii hormaa lakkaa’uu dhiisne akka Saba gabrummaa jalaa ba’uuf hadhaa qabuu Waan qabnuun #WBO cina hin dhaabbannu yoo ta’e,akka sabaatti lafarraa baduuf jirra.”Qarshii baasan maler foon hin quufan”jadha Oromoon
Kan ormaa hin leellisiin kan kee jabeefadhu. Kan ormaatti hin inaafin kankee tumsii akka sittii innaafan godhi.
Misaa’elaaf taankii ormaa irraa qawwee caccabduu kiyyattin amana.
Kan Ormaa hin leellisiin kan kee jabeefadhu. Kan ormaatti hin inaafin kankee tumsii akka sittii innaafan godhi. Misaa’elaaf taankii ormaa irraa qawwee caccabduu kiyyattin amana.
Kabajni WBO keenyaa fi Alaabaa keenyaaf haatehubboo.
Barrii Mililik deebi’ee?
Biltsiginnaan akkana. Nama waayee oromoo xiqqoo calanqisiise battalumatti ariti. Prezadantiin yunivaristii ambo hojii irraa kaafamanii jiru.
Habashaa oduu fi sobuu malee qabsoo hin beektu!
Kunoo, akkanatti qabsoo nagaa barsiisuu dha.
I stand with Oromo Freedom Struggle!
Nuti humna waliin dhaabbannu beekna; Bilisummaa keenyaaf waardiyyaa dha!!
Irbuu, amma illee Irbuu!!